Fanesoana 8 ho an'ny boky izay ho tianao ary hampandrosoanao ny tenanao | Famoronana an-tserasera
Fanesoana boky 8 ho tianao
Raha miasa eo amin'ny tontolon'ny literatiora ianao, dia manokan-tena hanoratra boky na mpamorona endrika ao amin'io sampana misy endrika sary io ianao. ny fahalalana ny atao hoe mockup book ary tena ilaina izany, mainka ankehitriny fa mandray be izy ireo.
Andraso, tsy hainao hoe inona ny boky fanesoana? Mbola tsy naheno an'io? Azo antoka fa nahita izany ianao fa tsy nampifandraisinao tamin'io voambolana io. Ka eto ambany eto dia hiresaka momba an'ity loharano maoderina ity izahay hampiroboroboana ireo boky azonao atolotra ny mpanjifanao na hahatonga ny bokinao handeha lavitra amin'ny fahitana.
1 Inona no atao hoe fihomehezana amin'ny boky
2 Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana mockups boky
3 Ohatra iray amin'ny fanesoana boky azonao ampiasaina
3.1 Famakiana boky mihidy Hardcover misokatra misokatra
3.3 Resour des Design maimaim-poana
3.4 ZippyPixel, iray amin'ireo toerana tsara indrindra hahitana ny fanesoana boky
3.6 Graphic Burger, fanesoana boky roa sosona
3.7 Fandikana boky Softcover Mockup
3.8 Fanesoana boky manokana
Inona no atao hoe fihomehezana amin'ny boky
Mazava sy haingana, afaka milaza aminao izahay fa ny mockup dia photomontage. Raha ny marina dia loharanom-pahalalana iray ampiasaina amin'ny famolavolana sary izay mamela ny rakotra boky hampidirina amina sehatra azo tanterahina na nofinofy, saingy amin'ny fomba izay nampidirina tokoa ka toa tena nalaina niaraka tamin'ny sary ilay sary. voafaritra tsara io boky io.
izany mamela ny mpanoratra hampiroborobo ny bokin'izy ireo amin'ny fomba hafa, ary ny tena izy dia photomontages, rehefa vita tsara, dia afaka mandalo tena izy. Mazava ho azy, mitandrema mba tsy hampidirina olona malaza, satria mety hanameloka anao izy ireo noho ny fampiasanao ny sariny hivarotra. Noho io antony io dia matetika no ampiasaina ny seho izay misy ny boky, toy ny olona mamaky (tsy hita ny tarehiny), mitondra ilay boky, mametraka azy eo ambony latabatra na seza, mampianatra azy, sns.
Azonao atao koa ny mampiasa fivoriambe amin'ny tranobe, sora-baventy, karatra fandraharahana, brochure ... Ny tanjona dia ny hisarika ny sain'ny olona ary hametraka ny fonony amin'ny toerana andavanandro ka toa tokony hisy isan'andro ny boky (ary amidy izany ).
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana mockups boky
Raha tsy mazava aminao ny fiasan'ny fanesoana boky dia tokony ho fantatrao fa tsy voafetra ihany ny fijerena sary ny vokatr'ilay boky amin'ny sary iray, fa mahomby kokoa noho izany.
Jereo ny sary amin'ny sary 3D. Ohatra, miaraka amin'ny fonon'ny boky hahasarika azy kokoa. Ity no ampiasain'ny mpamorona maro hanolotra ny volavolan-keviny momba ny fonony satria mora kokoa ny maka sary an-tsaina an'io fomba io toy izay amin'ny sary fisaka izay tsy fantatrao ny endriny ao amin'ilay boky.
Hamporisihana ny fampiroboroboana. Averina indray fa mitovy isika, tsy mitovy ny mametraka sarina fonony raha tsy amin'ny 3D izay ahitàna ny boky matevina, miaraka amin'ny hazondamosiny. Raha manao photomontages koa ianao dia azonao atao ny mampifandray ireo sary ireo amin'ny isan'andro isan'andro.
Hanana forona noforonina ianao. Io dia hahafahan'ny olona liana kokoa amin'ny boky, indrindra satria imbetsaka ireo zavaboary ireo dia mitovy amin'ny zava-misy, ka mahatonga anao hisalasala raha malaza na tsia ilay boky (ary amin'ny farany dia mitady vaovao misimisy momba azy ianao) .
Tsy mila ho mpaka sary matihanina ianao. Ny iray amin'ireo olana lehibe ho an'ny mpanoratra maro dia ny, rehefa te-hanolotra ny sangan'izy ireo izy ireo dia tsy matihanina ireo sary nalainy ary na dia tsy miraharaha aza ny mpamaky dia mety tsy mahazo aina izy ireo amin'ny fampiasana ireo sary ireo (satria ny ampahany amin'ny tranony, satria tsy hainy ny maka sary…). Ho azy ireo, ny vahaolana dia ny fampiasana mockup boky izay kanto kokoa ary manana famaranana matihanina.
Ohatra iray amin'ny fanesoana boky azonao ampiasaina
Fantatsika fa ny fomba tsara indrindra hahalalana anao ny atao hoe mockup book dia ny fahalalana azy amin'ny olona voalohany, eto izahay dia mamela anao hisafidy mockups boky maimaim-poana azonao ampiasaina. Ankoatr'izay, izahay hanome anarana anao pejy vitsivitsy izay ahafahanao manao photomontages. Ny sisa ataonao dia ampidiro ao amin'ny pejy ilay fonony dia izy ireo no mikarakara ny fametrahana azy ary asehoy anao ny valiny hampidina azy io ary manomboka mampiasa azy.
Famakiana boky mihidy Hardcover misokatra misokatra
Ity mockup boky ity dia mampiseho anao ny fonony, ny hazondamosina ary ny fonony aorian'ny boky amin'ny 3D. Miaraka ambadika tsotra, azonao atao ny mametraka ny fonony manontolo amin'ny sary ary manova ny background akory aza mifanaraka amin'ny volavolanao.
Avelanay ho anao ny rohy hahafahanao manao ampidino izany ary ampiasao.
Ao amin'ny Covervault dia ho hitanao ny manesoeso boky maimaim-poana. Mampiavaka azy ireo ny fananana kalitao tena tsara sy ny fanaovana pirinty. Ho fanampin'izay, izy ireo dia mety ho an'ny bokin'ny sagas sasany, na ho an'ny tsirairay.
Resour des Design maimaim-poana
Tranonkala iray hafa izay hahitanao olona maro boky maneso miaraka amin'ny sehatra samihafa ity Ve no. Mpamolavola sy mpanakanto marobe no miara-miasa eto izay mampakatra ny volavolany ary, mazava ho azy, mety tianao ny iray amin'izy ireo. Fantaro ihany koa fa maimaim-poana ny zava-drehetra.
ZippyPixel, iray amin'ireo toerana tsara indrindra hahitana ny fanesoana boky
Iray amin'ireo tranonkala izay ahitanao ny fanesoana boky maro. Mazava ho azy, ny misintona azy ireo dia mangataka anao hisoratra anarana ny tranonkala, saingy tsy olana lehibe izany ary tsy mangataka vola aminao izy ireo na zavatra toa izany.
Na dia tsy maimaim-poana aza ity loharanom-pahalalana ity, mora ny vidiny ary azonao atao ny mieritreritra ny mividy azy ireo. Mazava ho azy, amin'ny maha matihanina azy ireo, manana famaranana amin'ny ambaratonga avo kokoa izy ireo, koa ho an'ireo tetik'asa izay mitaky bebe kokoa aminao dia azonao atao ny misafidy ireo.
Graphic Burger, fanesoana boky roa sosona
Amin'ity tranga ity, mockup ny boky Misy boky roa izy io. Azonao atao ny mametraka ny fonony eo aloha amin'ny voalohany sy ny fonony aoriana ao amin'ny faharoa (na raha bilogy izy, apetraho amin'ny fomba hita maso ireo boky roa).
Eny, izany dia a môdely somary milazalaza bebe kokoa amin'izay tokony hampiasanao azy mba hahafahanao manao tsara ny fonony ary mandanjalanja ireo sivana sy aloka. Fa mendrika izany.
Ato amin'ity tranonkala ity dia afaka mahita endrika mockup maimaimpoana bebe kokoa koa ianao.
Fandikana boky Softcover Mockup
Izy io dia sary an-tsary ilay boky miaraka amin'ny fonony miaraka amina kopia maro kokoa ao aminy, mba hanomezan'izy ireo ny fahatsapana fa misy izy ireo. Tsotra be izy io, satria mifantoka amin'ny boky (na boky) tenany mamela ambadika miloko sy ny zavatra hafa kely.
Avelanay ho anao ny rohy.
Fanesoana boky manokana
Ahoana raha tsy manana refy mahazatra ny bokinao? Eny, izany no anananao ity famolavolana ity. A Fanesoana boky tena kanto izay manome lanja ny fonon'ny boky, izay no tokony hisarika ny saina indrindra.
Eto ianao manana ilay rohy.
Azonao atao ve ny manoro hevitra anay toerana bebe kokoa hanesoana ny boky?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fanesoana boky 8 ho tianao
Ampidiro amin'ny PDF ny sary